155㎡Circular Space, Zvizvarwa Zvitatu Kugara Pamwe Chete Pasina Chizvarwa Gap丨Rikyu Dhizaini - Yakanakisa Kitchen Faucets 2021 | Yakanakisa Bathroom Faucets | WOWOW Faucets
musha / Interior design / 155㎡Circular Space, Zvizvarwa Zvitatu Kugara Pamwe Pasina Generation Gap - Rikyu Dhizaini
155㎡Circular Space, Zvizvarwa Zvitatu Kugara Pamwe Pasina Generation Gap - Rikyu Dhizaini
2021 / 08 / 13 kupatsanuraInterior design 4198 0
Rikyu Dhizaini Yemukati Dhizaini Mubatanidzwa
Mumhuri ine zvizvarwa zvitatu, pane mukaha wechizvarwa pakati pezvizvarwa? Iyo yega nzvimbo pakati pemunhu uye nemhuri ingangoita yakaipa daro, kwete yakawanda yemunhu nzvimbo?
Kwete chete kufunga nezve inoonekwa uye inoshanda mashandisiro, asi zvakare maitiro ekuti uwane chiyero pakati pevanhu nemhuri mhuri chinhu chatinofanira kufunga nezvacho patinogadzirira yemhuri hombe.
Zvinoita here kuve wakanaka uye anoshanda?
Kana paine mhuri, pane "isu" chete uye kwete "Ini"?
Iko kushivirira uye kudzokera shure pakati pevechidiki chizvarwa nevakuru. Mune ino imba, marongero, mitsara uye maitiro echinhu zvakayananiswa zvakakwana.
Takatarisana neanoyevedza Henglin Bay, imba ino iri pamharadzano yegungwa negungwa, inova zvakare nzvimbo inofamba shiri dzinotama gore rega rega.
Amai Zhang pavakauya kuzobvunzana nezve dhizaini, vakaratidza chishuwo chavo chekuenzanisa zvido zvevakuru uye vachichengetedza zvakapfuma uye zvine simba zvekuona zvavakafarira. makabati ese epamba.
Kuruboshwe kunosangana neMhuri
Famba pamwe chete nemhuri yako
Imba yekupinda inzvimbo yakakosha kuti mhuri ipinde nekubuda, uye iri zvakare pakati peimba yese, saka ine dura rakachena uye netambo inofamba inotsvedza zvinooneka uye zvinoshanda.
Panyaya yekuchengetera, akasiyana mafambiro uye kudzika kwemakabati anoshandiswa kuronga kuchengetedza mbatya, shangu uye zvimwe zvinhu zvakasiyana. Rutivi rweshangu kabati padhoo rine kudzika kwakamanikana uye rinoshandisa mhando yekudhonza kuisa shangu dzinowanzo shandiswa, nepo kabati padhuze neshangu inoshandura chigaro inoshandiswa senzvimbo yeshangu yemwaka uye isingawanzo kusakara.
Chikamu chakasviba chekabineti kudivi rekuruboshwe isherufu yakanangana neshangu inoshandura chigaro, kwaunogona kuisa zvinhu zvidiki kuti ubude. Kureba kwechikamu chechitema chepamusoro uye chepasi makabati chakaringana bhutsu dzemukadzi uye dzimwe shangu dzisingaenderane saizi.
Mushure mekupinda pamusuwo, kabhineti iri kurudyi kumberi yakarongerwa kuve inzvimbo yehembe dzemhuri dzechipiri nemabhegi. Sekusangana kwenzira dzinorarama uye dzinofamba mumusha, zvinokwanisika kutamira kumba kana kubuda kamwechete kuenda.
Kabati rakamanikana pamusuwo rakagadzirwa nekuvhurika-mativi maviri, saka iyo kabhineti imwechete inogona kusangana ese ari maviri ekupinda uye yekutandarira pamusoro.
Pasi panoparadzaniswa nenzvimbo yekutandarira nematiles machena uye pasi pehuni, uye mitsara yakakombama inoenderana nekona yakakombama pamusoro.
Kutarisana nemusuwo wemba yekutandarira, iyo yakanakisa yakakombama arch yakagadzirwa nesimbi isina chinhu inonetesa matanda uye inounza pfungwa yetsika kumba kwemhuri. Kupfava kwakapfava kunowanikwa nesimbi yezvinhu inoyevedza uye izere nemapoinzi.
Imba yekutandarira inopa mwenje wakanaka uye maonero eimba, uye yekugara-yekudyira-kicheni nzvimbo yakajairika inoita fomu rakapfuma rekuunganidza zviitiko.
Rusvingo rwekumashure rweimba yekutandarira runotora fomu yesherufu yekuratidzira, iyo inogona kushandiswa senzvimbo yekuratidzira kana usingaone TV.
Mitsara mitema yemahara pamadziro izere nekufungidzira, izvo zvinogona kureva "Rudo" kana "kurarama".
Iwo akapfuma madiki madiki eimba yekutandarira, iyo diki arc mune iyo ruzivo inoratidzira iyo hombe arc mune chimiro
Rusvingo pakati penzvimbo yekutandarira nebhokisi rinotendera nzvimbo yeruzhinji kuti igadzire yekumonera-kutenderera mutsetse. Iyo inofambiswa pasofa ine akawanda-mativi ekugadzirisa inobvumira nhengo dzemhuri kuti dzitaure dzakatarisana-kumeso kunyangwe ivo varipi.
Chimiro cheTV kabhodhi uye purojekita kabhineti. Iyo purojekita kabhineti yakanyatsobatanidzwa mune yakasvibira uye nhema mutumbi weTV kabati, uko girini kabhineti inogona achiri kushandiswa seyakajairika dhirowa.
Mhuri inoda kuona mabhaisikopo asi isingade iyo TV kuve hunhu hukuru mumba yekutandarira. Mushure mevhiki rekufunga nezve izvi nemugadziri, muenzi wacho akazowana zvakanakisa zvepasirese.
Iyo laser purojekita yakaiswa mukabati inotsvedza ine girazi rekuona pamusoro. Iyo projekita inowanzo kuverengerwa muTV kabati, asi inogona kufambiswa zvakasununguka painenge ichishandiswa. Girazi rekuona rakamisikidzwa pamusoro pekabhodhi rinotumira 99.9% yechiedza, ichiitira chiitiko chakakwana chekuona.
Mushure mekupinda mubharkhoni, iyo 5m yakareba nzvimbo yakakamurwa kuita yekudzidza uye yekutarisa balcony. Yakagadzirwa nesimbi isina chinhu yakakombama siringi yakakombama, kubatanidza madziro nedenga kuti iite yakasimba pfungwa yekuputira, zvakare kunetesa kuvapo kwemadziro.
Iyo yakakura nzvimbo yeindigo uye peacock green coloring inopesana neimba yekutandarira, ichigadzira isingatarisirwi pfungwa yekukanganisa kune wese munhu anopinda mubharanda nzvimbo.
Nzvimbo yekudzidza yakagadzwa nechikamu cheparutivi semugovanisi, ichiwedzera zvakavanzika uye nepfungwa yekuvhara, uku uchichengetedza nhaurirano nenzvimbo yese yakajairwa.
Nzvimbo yekudyara yemiti pasi pezuva kune rimwe divi inobvumira mhuri kuti izorore kwekanguva vachiri kudzidza nekushanda.
Tafura yekudyira nemacheya zvakagadzirwa nehuni nesimbi, zvinoenderana nehunhu hwemba.
Chidzidzo chinobatanidza pasofa kunzvimbo yekudyira nekicheni. Tafura refu yekudyira inosarudzwa senzvimbo yekudyira yemhuri muhupamhi muchinjikwa horo, ichibvumira mhuri kutaurirana zvakatarisana.
Iko kushandiswa kwemafungu emafungu pane iyo façade yechitsuwa ichi inowedzera kubata kwechimanjemanje kuimba yese.
Singi uye chitofu chehari dzemagetsi zvakawedzerwa nechitsuwa. Kana varume nevakadzi vaine kudya kwakapfava mukati mevhiki, vanogona kudya chaiko mushure mekudziya kana kupisa pachitofu chemagetsi, izvo zvinowedzera kurerukirwa nekudyira kwekudya.
Iko kicheni inoshandisa musuwo unoonekera unotsvedza kudzivirira mafuta uye utsi uku uchiwedzera tambo yekuona kupinda. Iyo diki yekushandisa mudziyo yekuchengetera kurudyi ruoko rekicheni zvakare iri nyore yekuisa ndiro uye kuchengetera zvinhu mufiriji kune yakatarisana nedivi.
Iyo singi uye chitofu zvakaiswa pamativi maviri echitarisiko chakaita seL, zvichiita kuti zvive nyore kugeza, kucheka uye fry, uye zvakare kuona kupatsanurwa kwemvura uye kuoma.
Nzvimbo yekona yekicheni pakutanga yaive imba yekuchengetera. Mushure mekuivhura maererano nemaitiro ekubika emhuri, ikozvino yave nzvimbo yehove yababa vemukadzi, kwaanogona kubika yemhuri yake yaanofarira ndiro mune ramangwana!
-Kicheni yave ikozvino nzvimbo yehove yefry yababa vahostess.
Kurudyi uye ndega
Kusununguka kubva kusurukirwa
Imba yevana ine mwenje pamativi ese ari maviri ane maonero akapamhama uye matani ehuni haasi evana zvachose. Izvi zvinosiya nzvimbo yakawanda yeshanduko mune ramangwana uye akasiyana mabasa.
Iyo inonyanya kubata-dhiramu kititi pamusuwo, ine skateboard rusvingo rambi pamadziro, nemumhanzi mukomana akazara nesimba rinotonhorera.
Kana vachitamba madhiramu ane hunyanzvi madhiramu uye masilencer, vana vanogona kudzidzira vakasununguka kumba vasingakanganise vavakidzani.
Iyo yakafuma uye yakachengeterwa matoyi, mukomana mudiki anofara!
Rimwe divi remubhedha rinoshandisa musanganiswa wetafura yemubhedha uye kabati yekuchengetera kuita kuti kuchengetedzwa kwemasundries akasiyana siyana nematoyi. Imba inoyevedza nemwana kuti iwedzere kunakidzwa kwekuzvisanganisa-yega, wedzera bhegi rehanga rakashandurwa kuita diki nyika yevana.
Iyo tafura inoiswa mukona yakavharidzirwa nepfungwa yekukomberedzwa, uye iyo yekuchengetedza madziro inoshandiswa kuisa akasiyana siyana echikoro zvekushandisa. Bhodhi rehomwe rinoita kuti zvinhu zvionekwe nekukanda, zvichiita kuti zvive nyore kuti vana vatore zvinhu.
Marambi emadziro akapenya emadziro pamativi ese maviri anogadzira mwero wekurara. Maketeni e-brown satin ane mabhureki emabhureki akanyarara uye anogara kwenguva refu
Iyo ocher-yakajeka tenzi yekurara ine mafuta-akapenda magadzirirwo akapatsanurwa munzvimbo nhatu: cheki, imba yekugezera uye yekurara imba.
Mushure mekupfuura nepabhawa yekugezesa uye make-up uye cheki cheki yakazvimiririra, unopinda munzvimbo yekurara ine yakasimba yekupenda mafuta oiri, uye iyo yega-yega yekufambisa tambo inopa tenzi yekurara pfungwa yetsika.
Iyo mwenje-inotumira precast kongiri pani inoshandiswa pamusoro pekiyi kuti iite nyeredzi yedenga mhedzisiro, kuunza mwenje kubva kubarcony mhenyu isina kunyanyisa kuomarara.
Iyo yekufamba-mukati kabhodhi yakagadzirirwa nemativi matatu emakabati, uye nzvimbo yacho yakakamurwa zvinoenderana nekutora maitiro evarume nevakadzi.
Imba yekutarisa iri pamusuwo wekupinda kuti usangane netambo inoshanduka yemubati wemba asati aenda kumba uye kunze kwemusuwo, uye panguva imwechete, 1.1m yakakwira diki chinhu chekuchengetera kabhodhi yakagadzwa kuti ienzane nekukwirira kwemugadziri. , iyo inogona kuisa zvishongedzo zvakasiyana siyana uye zvigadzirwa zvekunaka mudura. Mushure mekuzora mukamuri yekugezera, unogona kupedzisa yekupedzisira chiito pano.
Izvo zvepasi zvese zvekushambidzira zvine anti-slip uye anti-bhakitiriya basa. Iyo chigaro chiri pasi rosette chinokutendera iwe kugara uye kugeza, uye zvakare ine hushamwari kwazvo kune vakuru.
Imba yekugezera yeruzhinji, iyo inonyanya kushandiswa nemhuri, inomisikidzwa senge rudzi rwekuparadzanisa katatu, uye singi rakagadzwa nemaune padyo neimba yekupinda kuti mhuri dzigeze maoko pavanodzoka kumba.
Imba yekugezera inovanza yekugezera yakazara yeJapan inosanganisa kugeza, kugeza, kudziya uye kuomesa mbatya. Iyo yekuvaka modular inogona kupedzwa mumazuva matatu, asi zvakakosha kuti uzive kuti nzvimbo nenzvimbo dzekugadzirisa zvinofanirwa kuchengetwa padanho rekuvaka remadziro.
Sekureva kwemubati wehosi, iyi imba yekugezera iyo yaainzwa kuti aifanirwa kuve nayo mushure mekuyedza iyo kumba kweshamwari muShanghai.
01 Kufambisa pasi yakatwasuka nekushandisa makabati
Nekuda kwenzvimbo yakadzokororwa yakaumbwa nekuwedzera kwechitoro chekicheni, zvakakwana kushandisa iyo yakajeka chengetedzo kabati kutenderedza iyo yakamira pamusoro pemadziro senzvimbo yekuratidzira yemakapu akajairika nemidziyo.
02 Shandisa kabhodhi kuzadza nzvimbo iri kuseri kwemusuwo
Iyo nzvimbo kuseri kwemusuwo wekamuri revana inogadzirwa mushure mekunge musuwo waendeswa kurudyi, uye kabhuku kemagirazi kanoshandiswa kuwedzera vhoriyamu yekuchengetedza pasina kutambisa chero nzvimbo.
03 Dzikamisa makona akavhurika nemakamuri ekuchengetera
Munzvimbo yakavhurika yekoridho yemusuwo wekupinda, mune "mambo bhomba" imba yekuchengetera mumba. Iko kufamba-munzvimbo ye1.3㎡ chete kunova kupera kwezvinhu zvese zvakakura mumba.
▲ Iyo yekutanga dhizaini dhizaini
Imba ine mwenje wakanakisa uye kufefetedza, mitsara yakajeka yechiitiko, uye nzvimbo dzinoyevedza munzvimbo yakatenderedza.
Kukanganisa kweimba iyi ndekwekuti nzvimbo yakajairwa yakakura asi makamuri madiki, nzvimbo yakaremara inonetsa kushandisa, uye kune dzimba dzekugezera dzakawanda nemabalkoni.
Plan Iyo pasi chirongwa mushure mekugadzirisa
Iyo yeruboshwe nzvimbo yeruzhinji uye kurudyi yakavanzika nzvimbo inotsanangurwa zvakajeka.
Deredza huwandu hwedzimba dzekugezera nemakamuri
Yokutanga ndeyekuvandudza hupenyu hwehupenyu munzvimbo yega, kusanganisa makona akaremara uye nekuwedzera mabasa ekuchengetedza pamwe nekunakidzwa.
Imba yese yakakamurwa zvakajeka kuita kuruboshwe uye kurudyi nzvimbo mushure mekugadziriswa. Nzvimbo yeruzhinji inoshandiswa sechiitiko chezviitiko zvekuungana kwemhuri / kuungana kweshamwari. Iyo yakavanzika nzvimbo iripo senyika diki kune yega nhengo yemhuri. Iko kusangana kweiyo yekupinda horo uye yeruzhinji imba yekugezera inobatanidza iyo isingachinjike uye ine simba nzvimbo, kuitira kuti mitsara yemabasa ehupenyu ive akatsetseka uye akajeka.
Purojekiti Nzvimbo / Lotus Guta
Dhizaini Yechikwata / Shu-Min Zhong, Jie Shi
Dhizaini Nzvimbo / 155 ㎡
Kushongedza mutengo / 90 w (kusasanganisa midziyo yemumba)
Pakapfuura :: Deconstructionism, Yakachena Space YeRusununguko Uye Spontaneity Zvadaro: Chiedza-Rakajeka Acrylic, Kududzira Runako rweArt Mune Mune Yemazuva Ano Context | Yuanhe Daqian